Xulalka Ilaa Iyo Haatan U Soo Baxay Koobka Qaramada Yurub Ee Euro 2020 %
Xulalka Ilaa Iyo Haatan U Soo Baxay Koobka Qaramada Yurub Ee Euro 2020
By Ramzi Yare	 Last updated Oct 14, 2019
Xulka Ruushka ayaa ah xulkii seddexaad ee xaqiijista inay u soo baxeen koobka Qaramada Yurub ee Euro 2020 ka dib markii 5-0 ku xasuuqeen xulka Cyprus oo 10 ciyaaryahan ku ciyaarayay inta badan.
Russia ayaa kaalinta labaad ee Group I ku soo baxday iyagoo ka danbeeya xulka kale ee isna xaqiijistay soo bixitaankiisa Euro 2020 ee Belgium kuwaasoo iyagana 2-0 uga badiyay Kazakhstan iyadoo ay labada gool u kala dhaliyeen Michy Batshuayi iyo Thomas MeunieXulka seddexaad ee ilaa iyo haatan xaqiijistay u soo bixitaanka Euro 2020 waa xulka Talyaaniga ka dib guushii ay ka gaareen xulka Greece oo ay 2-0 uga badiyeen.
Russia markii 12aad ayay ka soo muuqan doontaa tartanka Qaramada Yurub halka xulka Talyaaniga ay markii 10aad ay ka qeyb qaadan doonaan tartanka iyadoo Belgium ay u noqoneyso markii lixaad.
Kulamada kale ee isreebreebka Euro 2020 ee la ciyaaray Netherlands ayaa 2-1 kaga badiyay xulka Belarus kulan ka tirsan Group C waxaa labada gool xulka Holland u dhaliyay xiddiga Liverpool GeorginioWijnaldum.
Germany oo Group C ku jira ayaa iyadana caawa la ciyaareysa xulka Estonia, iyadoo Group-ka ay haatan 15 dhibcood ku hogaamineyso xulka Netherlands halka Germany ay leedahay 12 dhibcood si la mid ah North Ireland inkastoo Germany uu kulanka caawa u harsan tahay.
Buffon oo ka aragti dhiibtay Ronaldo & faa’iidada ay Juventus u leedahay
Daniel James Oo Ku Miyir Daboolmay Garoonka Dhexdiisa, Ficilkii Layaabka Lahaa Ee Shaqaalaha iyo Qaylo Dhaanta Man United